कानबाट किन पिप आउँछ ? जानी राखौँ – Etajakhabar
कानबाट किन पिप आउँछ ? जानी राखौँ
काठमाडौँ- कानले आवाज सुन्ने मात्र होइन शरीरको सन्तुलन पनि मिलाउने काम गर्छ । कानको मुख्य तीनवटा भाग हुन्छन्। बाहिरी भाग जसले बाहिरको आवाजलाई भित्र लैजाने काम गर्छ । मध्य भाग जसले बाहिरबाट उत्पन्न भएको ध्वनिलाई तरंगमा ल्याई आवश्यकता अनुसार शरीरभित्र प्रवेश गराउने काम गर्छ । भित्रि कान जसले तरंगबाट निस्केको ‘मेकानिकल इनर्जी’लाई ‘विद्युतीय इनर्जी’मा परिवर्तन गरी मस्तिष्कसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ र मानिसले सुन्छ ।
श्रवणशक्तिमा ह्रास आउनु, कान पाक्नु, बहिरोपन हुनु, कानमा पिप जम्नु, चोटपटकका कारण कानमा समस्या आउनु आदि कानमा प्रायः भइरहने समस्या हुन् । यस्ता समस्या विभिन्न कारणले हुनेगर्छन् । संक्रमण कानको प्रमुख समस्या हो । संक्रमण कानका तीनवटै भागमा हुन सक्छ । कान पाक्नु, दुख्नु, कानमा पिप जम्मा हुनु आदि कानको संक्रमणका लक्षण हुन् । कानको सम्पर्क मस्तिष्कसम्म हुने भएकाले कानको कुनै पनि संक्रमणले मस्तिष्कमा असर गर्न सक्छ ।स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
कानमा पिप जम्मा हुँदा त्यो मस्तिष्कमा पुगेर शरीरको सन्तुलन बिग्रिन सक्छ । कानको संक्रमण दुई किसिमको हुन्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन संक्रमण । अल्पकालीन संक्रमणले कान मात्र पाक्छ र सामान्य औषधिले निको हुन सक्छ । तर कान पाक्ने रोग जटिल हुँदा भित्रि कानको मस्तिष्क नजिकको हड्डी कुहिएर बाह्रै महिना कान पाकिरहने र कानबाट गन्धसहितको पिप बग्ने हुन सक्छ । यसले मस्तिष्कमा समेत असर पार्न सक्छ । यसको उपचारका लागि कानको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ ।
( डा। ढुण्डीराज पौडेल, इएनटी विभाग प्रमुख, वीर अस्पताल
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १७, २०७४ समय: १०:४३:३१